Par Taratra sur 06/07/2020
Tsy mirona intsony amin’ny fambolena matihanina ny tantsaha any Marovoay, faritra Boeny, fa mamboly izay ataony sakafo sisa ny maro. Tsy misy fanamboarana ny lalana mampifandray ireo kaominina ao amin’ny distrikan’i Marovoay. Tsy tafavoaka ny vokatra amin’ny ankapobeny. Ny lemak’i Marovoay, tsy misy fanamboarana ampolo taona maro ny fotodrafitrasa manondraka tanimbary. Lazain’ireo mpamboly fa mihena betsaka izao ny velaran-tany azo volena. Anarana sisa ny hoe ny tanimbary.
Sahirana ireo mpanjono madinika, saika manerana ny morontsiraka andrefana rehetra, manomboka any avaratra hatrany atsimo. Nampita fepetra maro amin’ny fitondram-panjakana malagasy ny Vondrona eoropeanina (UE) ho fiarovana azy ireo. Anisan’izany ny fanajana ny fari-dranomasina azon’ireo sambo mpanjono vaventy idirana, ny fanajana ny fe-potoana fanjonoana, ny fanaraha-maso amin’ny fitaovana arifomba ny fari-dranomasina.
Sarotra, hoy ny mpitantana orinasa iray, ny hamerina ireo mpiasa natsahatra amin’ny asany. Nanambara ny mpandraharaha ao amin’ny faritra afaka haba, mpanondrana lamba, fa na hisokatra aza ny tsena any ivelany, atahorana tsy hisy ny tinady. Samy sempotry ny Covid-19 izao ny firenen-drehetra ka na ireo afaka amin’ny fihibohana aza, mijery fomba hanarenana ny toekarena any aminy avy. Hitombo hatrany, noho izany, ireo very asa eto Madagasikara.
Malaza amin’ny fambolena lavanila koa izao ny any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana, saingy ny olana mbola betsaka ireo tsy manara-dalàna na “informel”. Ny vidin’ny lavanila maina, 900 000 Ar ny kilao; ny lavanila maitso, 30 000 Ar ny kilao. Asa goavana ny ataon’ny governoran’ny faritra ho fampanarahan-dalàna ireo mpisehatra amin’ity lavanila ity, manomboka amin’ny mpamboly sy ireo mpanangom-bokatra. Niarahana nivory ny fotoana hanokafana ny taom-piotazana.